Buraannews.com » Dhageyso:Arin Naxdin Leh&Murugo Leh oo habeenadaan kadhacdo Xabsiga Dhexe”Alle Masidaan Qabto Diinta Mise Dowladnimo
Dhageyso:Arin Naxdin Leh&Murugo Leh oo habeenadaan kadhacdo Xabsiga Dhexe”Alle Masidaan Qabto Diinta Mise Dowladnimo
September 18, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Xog hoose aan kahleeyno Xabsiga Dhexe ee Magaalada Muqdishoa aya shegaya in arin fool xumo leh kusoo kordhayeen mudooyinkii Ugu danbeeye waxaana taasi noo xaqiijiye dadka kuxiran iyo saraakiisha Amaanka u xilsaaran.
Arinta Ugu Foosha Xun ayaa ah kadib markii dhalinyaro aad u yar yar qol lagula xiray rag lagu xukumay dil ay iyo qaarkood xabsig daa in fal siweyn looga naxay kula kacayn dhalinyaro halkaasi lagu soo xiray.
Falkaan sida weyn looga naxay isa marka arintaani maqashay ka naxeen ayaa ah kadib markii dadkaasi maxkamada ku xukuntay falka dilka ayaa sadax wiil oo yar yar kula kacay Fal wasaqnimo leh kadib markii ay Fara xumeyeen.
Falkaan Faraxumeynta ayaa noo xaqiijiye mid kamid ah wiilkasha lagula kacay kaso sheegay in xili habeen kula kacxayn ragaan dilka ku xukumab waxaana oo sheegay in gacamaha in ay ka qab qabteen isla markaa sida ay donaan kula kaceyn allow oo sheegay in Askarta DFowlada aan wax kaqaban marka laga reebo in albaabka usoo garaaceyn kadibna isgaa tageen.
HALKAAN RIIX SI AAD U NAGEYSATO
Mid kamid ah hooyo dhashay wiilkeyda aya sheegtay in askari waardiyeeyo xabsiga usheegay in wiilkeyda lagula kacay fal faraxumeyn ah waxayna sheegtay in saraakiisha heesato xabsigaasi aan wax qaban isla markaa ay laxariireyn blse sheegeyn in warkaasi wax kajirin.
Arintaani ayaa saacadihii ugu danbeyse sii xoogeystay waxaana walaac xoogan kataaganyahe xabsiga dhexe magaalada waxaana dhalinyarada kuxiran lasheegay in qaarkood habeenkii kujirtaan Surwaalada halka qaarkood salika ku baadi goobaan meel darbi ah waxaana la arkayaa xiliyada maxaabiista wataan dhagax si oga difacaan falalka habeenkii lagula kaco.
Ugu danbeyntii xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa lagu wada xiraa qolal aad u yar yar oo aan caafimaad aan karin dad siyaabo kale duwan u eedeysan waxaana qaarkood yihn kuwa kasabrat nolosha kadib markii lagu xukumay Dil Toogasho kadibna kula kacay dadka laxiran falal aad u xun waxaana jira dhalinyaro aan qaan gaarin laxiran dad waa weyn oo Danbiyo culus qaba/.
Buraannews.com kama xishooto Xaqiiqda dhab ah:
Sihaam Cali Nuur.
Madaxa wararka London